အီစတာတနင်္ဂနွေ - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာအနှံ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2015-02 > အီစတာနေ့
အီစတာတနင်္ဂနွေနေ့၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်မကြာခဏငြင်းခုံရန်ဖြစ်သည်။ အချိန်ဇယားနှင့် Easter (ရိုးရာများစွာသည်အယူမှားနောက်ခံများကြောင့်ဖြစ်သည်) Worldwide Church of God (Grace Communion International) မှအသက်ကြီးသောဘာသာရေးဆရာ ၀ န်များသည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဝေစာတစ်ခုရှိခဲ့သည်ကိုမှတ်မိပေမည်။
သို့သော်ယနေ့ညီအစ်ကို၊ ညီအစ်မအများစုသည်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုဂုဏ်ပြုခြင်းသည်အယူမှားမဟုတ်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အီစတာပွဲ၌လူ့သမိုင်းတွင်အရေးကြီးဆုံးအခမ်းအနားကိုကျင်းပခြင်းအားဖြင့် G ၀ ံဂေလိတရား၏စိတ်နှလုံးကိုကြေငြာခဲ့သည်။ အသက်ရှင်ခဲ့ဖူးသူအားလုံးအတွက်အခိုင်အမာဖြစ်ရပ်တစ်ခု။ ၎င်းဖြစ်ရပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၌ယခုနှင့်ထာဝရပြောင်းလဲခြင်းကိုပြောင်းလဲစေသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်အီစတာပွဲများသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်တစ် ဦး ချင်းပြည့်စုံမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောငွေပေးငွေယူအကြောင်း ospel ၀ ံဂေလိတရား၏အတိုကောက်စာစောင်သာဖြစ်သည်။ ထိုအတွေးအခေါ်များကအောက်ပါအချက်များကိုဖော်ပြသည်။ သင်သည်သင်၏အပိုင်းကိုလုပ်ဆောင်ပြီးဘုရားသခင်ကသူ့အပိုင်းကိုလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ သခင်ယေရှုကိုသင်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပြီးနာခံပါ။ ဘုရားသခင်သည်သင့်အားဤနေရာတွင်ယခုဆုချပါလိမ့်မည်။ ထာဝရအသက်ကိုသင့်အားရရှိစေပါလိမ့်မည်။ ဒါကတော်တော်လေးကောင်းတဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုလိုထင်ရပါတယ်။
ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုဖယ်ရှားပြီးထာဝရအသက်ရရန်ယေရှုခရစ်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပြန်လည်ပေးအပ်သည်မှာမှန်ပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အရောင်းအ ၀ ယ်မှအပအခြားကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သည်။ သတင်းကောင်းသည်ပါတီနှစ်ခုကြားကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများဖလှယ်ခြင်းအကြောင်းမဟုတ်ပါ။ the ၀ ံဂေလိတရားကိုကုန်သွယ်ရေးတစ်ခုလိုအရောင်းအ ၀ ယ်ပြုခြင်းသည်လူတို့အားမှားယွင်းစွာထင်မြင်စေသည်။ ဒီချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူအာရုံစိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သဘောတူညီမှုကိုသဘောတူသည်ဖြစ်စေ၊ မဝယ်သည်ဖြစ်စေ၊ မတန်သည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်လုပ်ရပ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။ သို့သော်အီစတာသတင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းမဟုတ်ဘဲယေရှုအကြောင်းဖြစ်သည်။ သူကသူဘယ်သူလဲ၊ ငါတို့အတွက်သူလုပ်ပေးတာတွေပေါ့။
သန့်ရှင်းသောသီတင်းပတ်၏အထိမ်းအမှတ်ပွဲများနှင့်အတူအီစတာတနင်္ဂနွေသည်လူ့သမိုင်းတွင်အဓိကကျသည်။ ဖြစ်ရပ်များသည်ဇာတ်လမ်းကိုအခြားဇာတ်သိမ်းသို့ ဦး တည်စေခဲ့သည်။ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်နှင့်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုလမ်းကြောင်းသစ်သို့ပို့လိုက်သည်။ ယေရှုခရစ်၏သေခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်အရာရာပြောင်းလဲသွားသည်။ အီစတာသည်ဘဝသစ်အတွက်ဥပစာတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲဥများ၊ ဥယျာဉ်များနှင့်နွေ ဦး ရာသီဖက်မှထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည်ကိုယ်တော်၏မြေကြီးဓမ္မအမှု၏အထွတ်အထိပ်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ အီစတာတနင်္ဂနွေနေ့၏အဖြစ်အပျက်များသည်ခေတ်သစ်တစ်ခုစတင်ခဲ့သည်။ အီစတာပွဲ၌ယေရှု၏ဓမ္မအမှုအသစ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ယခုယေရှုသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသူအားလုံးကိုသူ၏ဓမ္မအမှု၌ပါ ၀ င်ရန်နှင့်လူသားအားလုံးအတွက်ခရစ်တော်ဆောင်ခဲ့သောအသက်တာသစ်၏သတင်းကောင်းကိုကြွေးကြော်ရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။
ဤတွင် တမန်တော်ပေါလု၏စကားများဖြစ်သည်။ 2. ကောရိန္သု
ထို့ကြောင့်ယခု မှစ၍ ငါတို့သည်ဇာတိအမျိုကို ထောက်၍ အဘယ်သူကိုမျှမသိမမှတ်။ ငါတို့သည်ဇာတိပကတိအတိုင်းကျင့်ရမည်အကြောင်း၊ ခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုသိတော်မူသည်မှန်လျှင်၊ ခရစ်တော်၌ရှိလျှင်အသစ်ပြုပြင်သောသတ္တဝါဖြစ်၏။ ဟောင်းသောအရာသည်လွန်သွားပြီ။ အသစ်ရောက်လာပြီ။ ငါတို့ကိုခရစ်တော်မှတစ်ဆင့်ဘုရားသခင်နှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်စေ။ ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်းအကြောင်းဟောပြောသောဘုရားသခင်ထံမှဤအရာအားလုံးကိုပြုသည်။ ဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်အထဲ၌ရှိတော်မူသည် ဖြစ်၍၊ လောကီသားတို့၏အပြစ်များကိုမှတ်တော်မမူ၊ ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုဆုံးမတော်မူသောကြောင့်၊ ငါတို့သည်ယခုခရစ်တော်၏သံတမန်ဖြစ်ကြ၏။ ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ခရစ်တော်ကိုမေးခြင်းငှါ၎င်း၊ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီရှိပါစေသော။
သို့သော် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအနေဖြင့် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို အချည်းနှီးမခံယူရန် ကျွန်ုပ်တို့သတိပေးအပ်ပါသည်။ “အကြောင်းမူကား၊ (ဟေရှာယ ၄9,8) "ကျေးဇူးတော်ကာလ၌ သင်တို့ကို ငါကြား၍ ကယ်တင်ရာနေ့၌ သင်တို့ကို ငါကူညီခဲ့၏။ ယခုအချိန်သည် ကျေးဇူးတော်၏အချိန်ဖြစ်သည်၊ ကြည့်ရှုလော့၊ ယခုသည် ကယ်တင်ရာနေ့ဖြစ်သည်!" (2. ကောရိန္သု 5,15-6,2).
အစမှလူသားထုကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်ဘုရားသခင့်အစီအစဉ်သည်အစမှအဆုံးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သောသမိုင်း၊ လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်ကိုပြန်လည်ပုံဖော်ခဲ့သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျေးဇူးတော်အချိန်တွင်အသက်ရှင်နေကြရပြီးသခင်ယေရှု၏နောက်လိုက်များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်ယာန်သာသနာပြုဘဝတွင်နေထိုင်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောဘဝနေထိုင်ရန်ခေါ်ယူခံရသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။